“Erga Jawaar Mohaammad nutti dabalamee hariiroon caasaa mootummaa walin qabnu bade”- KFO damee Jimmaa | Kichuu
Posted on February 11, 2020 by kichuu_admin
Wal dhibdeen paartii Koongirasii Federaalawaa Oromoo fi Bulchiinsa Magaala Jimmaa gidduu jiru tibbanna dubbii ijoo siyaasa Oromoo ta’eera.
Xalayaawwan qaamoleen lamaan waliif barreessanis miidiyaalee hawwaasummaa irratti qoodamaa turaniiru.
Caasaalee mootummaa godinichaa waliin wal hubannoon hojjechaa turre kan jedhan itti gaafatamaa paartii Koongirasii Federaalawaa Oromoo Godina Jimmaa, Obbo Umar Xaahir, erga Obbo Jawaar Mahaammad gara paartii KFOti makamanii as walitti dhufeenyi paartii isaanii fi caasaalee mootummaa magaala Jimmaa fi godina Jimmaa hammaachuu isaa BBC’tti himaniiru.
“Jawaar dhufuurraa kaasee gaarii hin turre. Erga jiilli KFO gara Jimmaatti dhufuuf murteefatee as akka diinaatti nu adamsuutti jiru” jedhan.
“Erga Jawaar Mahaammad nutti dabalamee as gutumaan guututti walitti dhufeenyi keenya ni bade” kan jedhan Obbo Umar, doorsifni fi hidhaan miseensota isaanii irratti raawwatamaa akka jiru himan.
Dhimma tibbana uummame yeroo ibsanis “nuti kan gaafanne duula na filadhaa miti. Isteediyeemitti miseensota fi deeggartoota akkasumas hawaasa godina Jimmaa dubbisuuf jilli KFO kan Jawaar of keessaa qabu akka dhufudha kan isaanitti himne” jedhan.
Qaamoleen bulchiinsaa magaala Jimmaa fi godina Jimmaa paartii isaanii irratti uummata kakaasuu isaanii fi jiilli KFO gara godinichaa deemuun uumataan akka wal hin agarreef hojjechaa akka jiran komatu Obbo Umar.
“Nuyi jiilli KFO uummata dubbisuu dhufaa jira jechuun xalayaa barreessine. Isaan immoo duula na filadhaati jedhanii istediyeemii hin heeyyamnu jedhan” jechuun BBC’tti himan.
“Dhiibbaa hamaatu nurratti adeemsifamaa jira. Adeemsi jirus baay’ee jibbisiisaadha” kan jedhan Obbo Umar yaaddoo fi sodaa keessa akka jiran dubbatu.
Sagantaa guyyaa Kibxataatti qabatanii turanis haquu isaanii fi saganticha fulduratti dabarsuun murtee waajjira mummee KFO eegaa akka jiranis Obbo Umar Xaahir BBC’tti himaniiru.
<strongclass=”story-body__crosshead”>Deebii Bulchiinsa Magaala Jimmaa
Walitti dhufeenyi paartilee morkattootaa waliin qaban akkaataa heera biyyattiirratti kaa’ametti akka ta’e BBC’tti kan himan kantiibaan magaala Jimmaa Obbo Makkiyyuu Mahaammad, xalayaan miidiyaa hawwaasummaa irratti qoodamaa jiru waajjira isaaniitii barreefamuu isaa fi sagantaa KFO magaala Jimmaa ilaalchisuun dhuunfaattis hooggansa KFO walin haasa’aa turuu isaanii himan.
“Dhimmi dheengadda uummame icciitiin keessa isaa jiru ‘waan ani jedhe malee waan isin jettan hin dhageenyu’ kan jedhudha” jedhan Obbo Makkiyyuun.
“Boordiin filannoo duula na filadhaaf kallattii hin keenye. Wanti godinaalee adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru duula na filadhaati. Sagantaa wal baruu miti.”
“Kanarraa kaanee duulli na filadhaa hin heeyyamamne kan jedhu jala sararree itti himne” jechuunis himan.
JAWAR MOHAMMAD/FACEBOOK Goodayyaa suuraa Hogganoota KFO Calanqootti
Gaaffiin nuf osoo hin dhiyaatiin uummatni waamamuu eegale kan jedhan Obbo Makkiyyun dhimmi nageenyaa heeyyamamuu dhiisuu isteediyeemif sababa isa biraa ta’uu himan.
“Akka mootummaatti qophii barbaachisa. Har’uma ka’anii gaafa akkasiin dhufaa kan jedhu hin hojjetu. Qophii barbaachisa.”
“Eegumsa cimsuu fi haala magaalaa fi haala nageenya naannoo qorachuu barbaachisa. Kana giddugaleessa godhannee ammaaf sagantaan guyyaa jedhametti akka hin danda’amne fi guyyaa biraatti dabarsuu akka qaban dhuunfaadhaanis itti himaa turre” jedhu.
OMN: ODUU Guyyaa ( Gurr 11, 2020 )
Ogeeyyin seeraa maal jedhu?
Ogeessi seeraa Obbo Ibsaa Gammadaa maalummaa duula na filadhaa fi qabiyyee isaa himuun eegalu. “Duula na filadhaa jechuun paartiin siyaasaa aangoo siyaasaa qabachuuf, filannoo dorgomee mo’achuuf sagantaa fi imaammata isaa uummataaf kan itti dhiyeessudha” jedhu Obbo Ibsaan.
Akka seera boordii filannoottis duulli na filadhaa sagantaa qophaa’e akka qabu fi paartileen siyaasaa garuu yeroo kamittu uummata walin walgahuu akka danda’an himu.
Gama biraatiin dhaabbilen siyaasaa yeroo uummataan wal arganitti wanti dubbachuu qaban fi hin qabne jedhamee seeraan kaa’ame akka hin jirres dubbatu.
“Waltajjii hundarratti paartiin siyaasaa tokko dhimma imaammata isaatiin walqabatu, dhimma uummataa ykn siyaasa biyyattii irratti yeroo kamittuu uummata walin walgahii gaggeessuu ni danda’a. Nu filadhaa jechuus ni danda’a. Wanti dhorkame tokkoyyuu hin jiru.”
“Duula na filadhaa jedhamee kan Boordii Filannootiin ibsamee jiru kan qabeenya mootummaa bifa walqixa ta’en itti fayyadaman jechuudha malee paartiin of danda’ee hin socho’u jechuu miti” jechuunis himu ogeessi kun.
Dabalataan bulchiinsi magaala Jimmaa sagantaa duula na filadhaa Boordii Filannoo Biyyaalessaa akka sababaatti eerun paartii KFO’f Isteediyeemii heeyyamuu dhiisun isaa bu’uura seeraa akka hin qabnes Obbo Ibsaan himu.
Gama biraatin ogeessi seeraa Obbo Indaalkaachoo Warquu immoo “duulli na filadhaa yeroo qaba. Seera qabeessa ta’ee kan adeemsifamu yeroo boordiin filannoo kaa’e keessatti” jedhu.
“Sanaan alatti paartileen siyaasaa uumatatti dhiyaatanii walgahiiwwan fi haasaawwan gochuu danda’u. Sun immoo akka duula na filadhaatti kan lakkaa’amu miti” jedhan.Yaalin dhimma kanarratti yaada Boordii Filannoo Biyyaalessaa argachuuf taasifne hin milkoofne.
Karoorri bilxiginnaa Oromootni biroo Oromoota Jimmaatti akka aaranii addaan kutan irratti hojjataa jiru. Ummatni Jimmaa dhiibbaa guddaatu irra jira. Lola sammuu cimaatu itti baname. Yeroo ammaatti ummata Jimmaa komachuun sirrii miti. Ummata ukkaamfamedha. Gargaarsa barbaadu. Ummata Jimmaatiin Bilxiginnaa deeggaraa jirtu jedhanii komachuun karoora Bilxiginnaatti galuu ta’a.
Jimma keessatti Nafxanyoonni Oromoo fakkaatanii Bilxiginnaa deeggaraa jiru. Sababnis Paartiin PP mirga Nafxanyaan Oromiyaa bulchuu kenneefii jira. Yoo filataman Nafxanyaan Jimma bulchuuf carraa qabdi. Garuu paartiilee Oromoo biroo kan akka KFO abbaan biyyaa akka of bulchu dhaadhessaa jiru. Jimma kan bulchu abbaa biyyaati, kan ummatni amanu fi beeku. Kanaaf akka adeemsa paartii KFO’tti carraan Nafxanyoota Oromiyaa keessatti Oromoo jalatti buluu ta’a. Jarri kana hin fedhan. Kanaaf jecha Bilxiginnaa filachuuf ni dirqamu.
Caasaalee mootummaa godinichaa waliin wal hubannoon hojjechaa turre kan jedhan itti gaafatamaa paartii Koongirasii Federaalawaa Oromoo Godina Jimmaa, Obbo Umar Xaahir, booda kana doorsifni fi hidhaan miseensota isaanii irratti raawwatamaa akka jiru dubbatu.
BB$: Marii Haala Yeroo “Dr.Abiyyi Ummata Oromoo Maalif gane?”
የተለያዩ መረጃዎች (CSAን ጨምሮ ) አጠቃላይ የጅማ ከተማ ህዝብ ብዛት 300,000 አከባቢ ነው።
ሰሞኑን እየተደረጉ ያሉት ሰልፎች የጅማን ህዝብ ይወክላል ለማለት በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ የሚደረገውን ሰልፍ መጠበቅ የግድ ይላል።
ዜጎች የፈለጉትን ፓርቲ (በፋላጎትም ይሁን በክፍያ )መደገፍ መብት አላቸው። ነገር ግን ሁሉም ዜጎች የሚፈልጉትን ፓርቲ በነፃነት እንዳይደግፉ ሰልፍ እንዳይወጡ መንግስት ጫና መፍጠር የለበትም አዳራሽና stadium መከልከል የለበትም የተቀዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ማዋከብ የለበትም።
በአጠቃላይ ይህ ዞን/ወረዳ የእኔ ነው የሚል ፓርቲ ፀረ ዴሞከራሲ የሆነ ፓርቲ ብቻ ነው።